ကျွန်ုပ်တို့၏ 2012 Super Bowl, ဗားရှင်း 2! | Martech Zone
တိုးတက်မှုဆက်ရှိနေသည်! Pat Coyle နဲ့ကျွန်တော်ဟာအရည်အချင်းပြည့်ဝတဲ့ Tim (Curtis) နဲ့အတူအလုပ်လုပ်ကြပါတယ် အသစ်တီထွင်ပြုလုပ်သော Indianapolis ရှိဤနေရာတွင် ၂၀၁၂ Super Bowl အတွက်လေလံဆွဲရန်အတွက်ဝက်ဘ်ဆိုက်တိုးမြှင့်ခြင်းအကြောင်း။
Super Bowl ကော်မတီကိုဥက္ကPresident္ဌ Mark Miles ဦး ဆောင်သည် ဗဟိုအင်ဒီယားနားကော်ပိုရိတ်မိတ်ဖက်။ မာ့ခ်သည်ထူးခြားသောအလုပ်တစ်ခုလုပ်နေပြီးအသိုင်းအဝိုင်း၏ပံ့ပိုးမှုကိုအသိပေးရန်နှင့် ၀ င်ရောက်ရန် web နည်းပညာများကိုအလွယ်တကူလက်ခံသည်။ ဝက်ဘ်ဆိုက်၏ဤ“ ဗားရှင်း” သည်ရည်မှန်းချက်ကိုရောင်ပြန်ဟပ်သည် - ယခုကျွန်ုပ်တို့တွင်အောက်ပါအင်္ဂါရပ်များရှိသည်။
ဗွီဒီယိုများကိုကစားသူတစ် ဦး တွင်ပြသပြီးအသုံးပြုရန်ပြောင်းလဲသည် Youtube ကို ငါတို့ viral သွားနိုင်အောင်! သင်၏မာနကိုပြသရန်နှင့်သင်၏ဘလော့ဂ်ပေါ်တွင်ဗီဒီယိုကိုပြသရန်သေချာပါစေ။
Mark သည်စွဲချက်ကိုပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ဦး ဆောင်ရန်ရည်စူးသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အဖွဲ့ ၀ င်များလုပ်ဆောင်နေသည့်အရာနှင့်သူတို့မည်သို့ကူညီနိုင်သည်ကိုနောက်ဆုံးသတင်းများပေးရန်အသိုင်းအဝိုင်းအား blogging ပြုလုပ်ရန်ကော်မတီရရှိသည်။ Compendium ဆော့ (ဖ်) ဝဲ (လ်) သည်ပြောင်းရွှေ့မှုကိုအထောက်အကူပြုရန်အရှိန်မြှင့်ခဲ့ပြီးသူတို့၏အဆင့်အတန်းကိုမြှင့်တင်ရန်အကောင့်များပေးခဲ့သည် ကော်ပိုရိတ်ဘလော့ဂ်လျှောက်လွှာ!
စကားစမြည် ဝဘ်ဆိုက်မှ ၀ င်ရောက်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်သင် ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်အတွက်ပင်မစာမျက်နှာတွင်ဖော်ပြထားသည်။ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအတွက်အပြုသဘောဆောင်သည်ဖြစ်စေ၊ မဖြစ်စေစကားပြောဆိုမှုတွင်ပါ ၀ င်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အားနည်းလမ်းများပေးရန်အရေးကြီးသည်။ ကော်မတီသည် Super Bowl ကိုရယူရန်ရည်ရွယ်ရုံသက်သက်မဟုတ်သော်လည်း၎င်းတို့သည်အကောင်းဆုံး Bowl အဖြစ်မည်သို့ရပ်တည်နိုင်မည်ကိုဒေသခံများအားထည့်သွင်းစဉ်းစားစေလိုသည်။
Yahoo! ပိုက်များ၊ ကျွန်ုပ်သည် ၂၀၁၂ Superbowl အကြောင်းရေးသည့်အခါကျွန်ုပ်တို့၏ဒေသဆိုင်ရာသတင်းများနှင့်မီဒီယာမိတ်ဖက်များမှနောက်ဆုံးဆောင်းပါးများကိုထုတ်လွှတ်ရန်နှင့်စစ်ထုတ်ရန်ရှုပ်ထွေးသောအစီအစဉ်တစ်ခုကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ လေလံဆွဲရန်အတွက်ဒေသခံမီဒီယာအထောက်အပံ့များကိုပြသနိုင်သည့်အတွက်သတင်းအချက်အလက်များကိုလည်းမိနစ်အနည်းငယ်အထိတင်ပြနိူင်သည်။
ExactTarget ကော်မတီ၏အကူအညီကိုရယူပြီးသတင်းသတိပေးချက်များနှင့်သတင်းလွှာများကိုထုတ်ပေးမည့်အကောင့်တစ်ခုပေးခဲ့သည်။ ExactTarget's API ကိုသုံးပြီး feeds နဲ့ blog ကိုအီးမေးလ်နဲ့ပေါင်းစပ်တော့မယ်
ဤအရာအလုံးစုံ 8PM ပြီးနောက်နှင့်တနင်္ဂနွေ! ကောင်လေးတစ်ယောက်ကိုငြီးငွေ့ဖို့လုံလောက်တယ်၊ ဒါပေမဲ့ဒါကသိပ်အရေးကြီးတယ်၊
Tags: 2012 စူပါဖလားမြင်းကလေးIndianapolisindianapolis coltindianapolis ကြယ်ပွင့်pat coyleစူပါဖလားကို
သင်၏အွန်လိုင်း Persona ကိုကာကွယ်ခြင်း
26:2008 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 12, 26 တွင်
ပြီးသားပိုကောင်းရှာဖွေနေ။ တစ်ညလုံး“ အခြေခံအချက်အလက်” မှ“ လူနေမှု၊ အသက်ရှူခြင်း၊ နောက်ဆုံးအချက်အလက်အတွက်နေရာ” သို့သွားသည်။ အလွန်ကောင်းသောအလုပ်။
26:2008 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 1, 51 တွင်